Ravalomanana sy Rajoelina Nihaona tany Frantsa ?
Asa na fifanandrifian-javatra fa samy tany Fratsa ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana sy ny filohan’ny tetezamita teo aloha Andry Rajoelina ny herinandro lasa teo.
Nahemotra ny fanadinam-panjakana Hihemotra koa ny fifidianana 2018…
Sanganehana ny rehetra nandre ny vaovao amin’ny hanemorana ny fanadinam-panjakana eto amintsika amin’ity taom-pianarana ity. Raha ny tetiandro napetraka tany am-boalohany dia toy izao :
Vazaha mpiray afera amin’ny HVM Vaky koa ny afera Ciro Visone
Mivoaka ny resaka kimaizimaizina momba ny dian’ny delegasionina Malagasy notarihin’ny filoham-pirenena tany Italie ny volana oktobra 2017.
Filan-kevitry ny fampihavanana malagasy Tsy te hiresaka Ravalomanana
Hidina ifotony izahay eto anivon’ny komisionin’ny fahamarinana sy famelana ary fifamelana (vérité, pardon et amnistie) ato anatin’ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy na CFM, hoy izy ireo tetsy amin’ny biraony etsy Ampefiloha.
Tomban’ezaka momba ny lisi-pifidianana 9 500 000 no voasoratra anarana
Nitarika fivoriana teny Mahazoarivo ny praiminisitra lehiben’ny governemanta, Mahafaly Solonandrasana Olivier, mahakasika ny tomban’ezaka vita amin’ny fanatsarana ny lisi-pifidianana.
Fiarahamonim-pirenena Handrakotra ny biraom-pifidianana rehetra
Tontosa omaly tetsy amin’ny foiben’ny vaomiera mahaleotena misahana ny fifidianana na ny CENI etsy Nanisana ny fifanaovan-tsoniam-piaraha-miasa eo anivon’ity vaomiera ity sy ny fivondronan’ireo fiarahamonim-pirenena na ny Rohy.
Hery Rajaonarimampianina Inona marina no tena anton-diany tany amin’ny faritra Zafimaniry ?
Manomboka mahalasa eritreritra ankehitriny ny antony marina nanosika ny filoha Hery Rajaonarimampianina hitsidika an’Ambohimitombo, renivohitry ny faritra Zafimaniry tamin’ny fiandohan’ity herinandro ity. Nihaona mivantana tamin’ny vahoaka izy,
Nolazainy fa ny olona mihitsy no efa mafana ra ka tsy mahafehy tena intsony fa tsy resaka hoe mahatoky na tsy mahatoky fitsarana izany ilay izy. Raha ny nahamay ny Jirama Farafangana sy ny nandoran’olona ilay vehivavy tao Mananjary, ohatra, dia tsy mbola nisy nidiran’ny fitsarana mihitsy ny raharaha fa ny olona no nihetsika avy hatrany. Tontosa omaly tany Antsirabe moa ny fametrahana tamin’ny fomba ofisialy ny mpampanoa lalàna vaovao, Rtoa Djaojoma Colette. Nanambarany fa hiezaka ny hiady mafy amin’ny asa efa natomboky ny teo aloha izy, dia ny fanafoanana ireo mpanelanelana sy mpisoloky izay malaza ao Antsirabe ary hiasa araka ny fahamarinana tokoa ary hiady amin’ny kolikoly sy ny fanelanelanana diso tafahoatra ataon’ny manampahefana, izay toa efa malaza any ambony any. Efa fantany fa anisan’ny olana miandry azy ny olan’ny tany ankoatra ny fitsaram-bahoaka izay melohin’ny lalàna, ka hiezaka ny hiasa am-pahamarinana ny tenany, hoy izy. Tany Antsiranana moa no niasany teo alohan’izao nandraisany ny asa ao Antsirabe izao ka mahatoky azy ny fitsarana satria voalaza fa efa voafehiny ny “Foroches” tany Antsiranana.